Ni Ni Mar (Paung Ti) လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အ၀ရရှိရေး ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒ̔ထုတ်ဖော်နေသူတဦး၏ ပန်ကြားလွှာ – MoeMaKa Burmese News & Media
နီနီမာ (ပေါင်းတည်)။ မေ ၂၅၊ ၂၀၁၂
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတနိင်ငံလုံးတွင် လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အ၀ ရရှိရေး အတွက် ပြည်သူလူထုမှု ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်သူလူထုသို့မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားလွှာထုတ်ပြီး ပြည်သူကို လျှပ်စစ်မီး အပြည့်အ၀ မပေးနိုင်ခြင်းကို နားလည်ပေးရန်၊ လျှပ်စစ်မီးကို ချွေတာသုံးစွဲခြင်း ဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပါရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးပြည်မြို့တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသူများကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခြင်း၊ နောက်တနေ့တွင် ဆန္ဒမပြလျှင် လွှတ်ပေးမည်ဟု ညှိနှိုင်းကာ လူထု၏အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ထပ်မံချိုးဖောက်ပြီး ဖြေရှင်းနေပြန်သည်ဟု ကြားသိရပါတယ်..။ အခုအခြေအနေဟာ တိုင်းပြည်ရှေ့ဆက်ရမယ့် ဒီမိုကရေစီခရီးစဉ်အတွက် များစွာစိုးရိမ်ဖွယ် ဖြစ်နေပါပြီ။
တဖန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေဖြင့် တရားဝင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှ ပြည်သူလူထုအား ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်းပြီး မီးမှိတ်နေဖို့ မကြာမီ မိုးရွာပြီး မိုးရေရလျင် ဒီကိစ္စပြေလည်သွားပါမယ် လို့ လက်လွတ်စပယ် ပြောဆိုလိုက်ခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သီးခံ နားလည်ပေးလာခဲ့ရသော ပြည်သူလူထုကို မစာမနာ စော်ကားလိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး လူထု ဆန္ဒဖော်ထုပ်ပွဲများမှာ အနှစ်နှစ်အလလက မတရားဖိနှပ်ခဲ့ သဖြင့်ခေါင်းငုံ့ လည်စင်းသည်းခံလာသော ပြည်သူလူထုကို ပမာမခန့် စော်ကားစွာ “လျှပ်စစ်မီးတွေ ပိုနေလို့ ထုတ်ရောင်းစားတာပါ” လို့တာဝန်မဲ့စွာ ပြောကြားခဲ့သော လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း၏ စကားတခွန်းမှ စတင်ပေါက်ကွဲလာခဲ့တာလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ပိုလျှံတယ် လို့ ပြောပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတတွေကို ထင်သလို ထုတ်ရောင်းစားကာ တိုင်းပြည် တွင်းမှ ပြည်သူများကို နားလည် ပေးခိုင်းခြင်းမှာ မတရားပါ..။
ယခု ပြည်သူလူထု၏ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများကို နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်ရှိသူများမှ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲကာ ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ဖြေရှင်းခြင်းများ၊ အကျိုးအကြောင်း ဆင်ခြင်မဲ့ ရှက်စရာ စကားလုံးများကို ထပ်မံသုံးစွဲကာ ပြည်သူလူထုအားစော်ကားသလို ပြုမူခြင်းများဖြင့် လက်ရှိပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်မထင်ပါ။
ကိုယ်တိုင်ခံစား ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသော ပြည်သူတယောက်အနေဖြင့် ပြသနာ၏ အဖြေကို ချဉ်းကပ်ဆင်ခြင်ကြည့်မိရာ …
(၂) လူထု ကို စော်ကားပြောဆို ခဲ့ သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို တာဝန်မှရပ်စဲ အပြစ်ပေးလိုက်ပါ။
ထိုသို့ဆိုလျင် မိမိတိုင်းပြည်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သယံဇာတ အလျှံအပယ်ရနေပါလျှက် အမှောင်ထုအတွင်းမှာ ငရဲကျနေရသဖြင့် ခံပြင်းဒေါသထွက်နေသော ပြည်သူ လူထုအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအပေါ် နားလည်ပေးကောင်း ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ထိုသို့အပြန်အလှန် နားလည်မှုများဖြင့် တည်ဆောက်မှသာ တိုင်းပြည်ရှေ့ဆက်ရမယ့် ဒီမိုကရေစီခရီးကို ချောချောမွေ့မွေ့လျှောက် လှမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီထင်မြင်ယူဆချက်များမှာ သာမန်ပြည်သူတယောက်၏ တိုင်းပြည်အကျပ်အတည်းဖြေရှင်းရေး အပေါ် ချဉ်းကပ်ဆင်ခြင်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွင်းမှ ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများ၊ နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့များမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချဉ်းကပ်ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းချက်များ အမြန်ထွက်ပေါ်လာပါစေ။ နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ရှိသူများကလည်း ပြည်သူ့အသံကို စေတနာမှန်မှန်နဲ့ နားလည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။ ။
(ဓာတ်ပုံ – ကာတွန်းပုံကို ကိုင်စွဲပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသော ရန်ကုန်ကမိဘပြည်သူတဦး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်)
← ပန်းသီး၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာသ – Pan Thee
Ashin Wirathu – “လူပျံတော်များကို ကြိုဆိုကြ” →
3 thoughts on “Ni Ni Mar (Paung Ti) လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အ၀ရရှိရေး ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒ̔ထုတ်ဖော်နေသူတဦး၏ ပန်ကြားလွှာ”
You right go ahead.
Think less about yourselves, members of the admin but more about the public as you guys didn’t do it within last 60 years. U gotachance now and grap it to show u are really humane and deserve the position u sit in now.
ပေါင်းတည်ကို ပေါင်းတီ လို့မရေးပါဘူးဟ မောင်ရစ်ရဲ့။ Paungde လို့ဘိလပ်လို စာလုံးပေါင်းကြတာပဲ
ကိုလိုနီ ဆိုးမွေတွေကိုဖက်တွယ်ထားတယ်လို့ ပြောရင်လဲ မတတ်နိုင်ဘူးလကွ ။ အဲလို စာလုံးပေါင်းတာကတော့ ပိုပြီး အထာကျလို့ပြောတာပါ။
ဒီနေရာမှာ ပြည် ကို prome လို့ ပေါင်းတာမျိုးကတော့လွဲတာပေါ့လေ။ အဲဒါ ကတော့ ဘိလပ်သားတွေ နားဖာချေးတစ်နေတုန်း ကြားမိကြားရာ ဖမ်း စာလုံးပေါင်းလိုက်ပုံရပါတယ်။